सहकारीमा नयाँ के-के नियम लागु हुँदै छ ? हेर्नुहोस – RadioMBC
Home > अर्थ/बजार > सहकारीमा नयाँ के-के नियम लागु हुँदै छ ? हेर्नुहोस
२९ माघ २०७४, सोमबार ११:११
काठमाण्डौ ,२९ माघ, पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा सरकारले कडाई गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ठगी बढेको तथा दर्ता मात्रै गराएर कारोबार नगरेको पाइएपछि सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न थालेको छ । विगत केही समयमा नै सहकारी क्षेत्रमा थुप्रै नियम तथा निर्देशनहरु जारी गरिएका छन् । तीन निर्देशनहरुको उचित कार्यान्वयनमा पनि सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३४ हजार सहकारी संस्थाले ६३ लाख सदस्यबाट ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् ।